ကိုကျော် (မြစ်ကြီးနား) - Red Roulette - တရုတ်အစိုးရ မဖတ်လိုတဲ့စာအုပ် - MoeMaKa Media
Home / Article / China / Ko Kyaw (Myitkyina) / Literature / ကိုကျော် (မြစ်ကြီးနား) - Red Roulette - တရုတ်အစိုးရ မဖတ်လိုတဲ့စာအုပ်
Article, China, Ko Kyaw (Myitkyina), Literature
(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၂၁
ဒက်စ်မွန်စိန်း (Desmond Shum) ရဲ့ ဘီလျံနာ ဇနီးဟောင်း တရုတ်ပြည်မှာ အစအနလုံးဝမရှိဘဲ ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီ။ သူ့ဇနီးဆီကို ဖုန်းအကြိမ်ရာချီမက ဆက်ခဲ့ပေမဲ့ တဖက်ဖုန်းလိုင်းက အမြဲတမ်းပိတ်ထားတာနဲ့ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စက်တင်ဘာလအစောပိုင်း တစ်နေ့မှာတော့ ဇနီးသည် ဝစ်ဒ်နီတွမ် (Whitney Duan) ဆီက အရေးတကြီး မက်ဆေ့တွေရခဲ့ပြီး ဖုန်းခေါ်ဖို့ပြောထားပါတယ်။
ဒက်စ်မွန် ဖုန်းပြန်ခေါ်တော့ ဝစ်ဒ်နီလာကိုင်တယ်၊ တဆက်တည်းမှာပဲ သူရေးပြီး ထုတ်ဝေဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ 'Red Roulette: An Insider’s Story of Wealth, Power, Corruption, and Vengeance in Today’s China' စာအုပ်ကို မထုတ်ဝေဖို့ ရပ်ပစ်လိုက်ဖို့ အတင်းတောင်းပန်ပါတော့တယ်။ အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ ဝစ်ဒ်နီ ပျောက်ဆုံးသွားပုံနဲ့ စီစီပီ (တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ) ထိပ်တန်းအရာရှိတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့မှာ ပါဝင်ဆက်နွယ်နေမှု လာဘ်စားမှုတို့ကို အသေးစိတ်ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ပီကင်းမြို့လမ်းတစ်နေရာမှ ဝစ်ဒ်နီ ပျောက်ဆုံးခဲ့ချိန်ကတည်းက သူတို့လင်မယားအကြား ပထမဆုံးအကြိမ် ဖုန်းအဆက်သွယ်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး၊ တိုက်ဆိုင်စွာပဲ သူရေးတဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အနောက်တိုင်းမီဒီယာတွေမှာ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်တွေ စပြီးထွက်လာတဲ့ နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်က ဒက်စ်မွန် နဲ့ ဝစ်ဒ်နီ တို့ဟာ တရုတ်ပြည် ပီကင်းမြို့တော် တည်ဆောက်ပြုပြင်ရေး စီမံကိန်းများမှာ အကျိုးအမြတ်ကြီးမားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရခဲ့ပါတယ်။ ယခင် တရုတ်ပြည်ဝန်ကြီးချုပ် ဝမ်ကျားပေါင် (Wen Jiabao) ရဲ့ဇနီးနဲ့ ထိပ်တန်းအရာရှိတို့နဲ့ အဆက်သွယ်ကောင်း ရှိခဲ့တာကြောင့် ပီကင်းကာဂိုလေဆိပ်နဲ့ Bulgari ဟိုတယ် စတဲ့ပရောဂျက်တွေမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး၊ ဝစ်ဒ်နီဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီးဘီလျံနာ စာရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်သမ္မတ ရှီးကျင့်ဖင်း အာဏာရလာတော့ တရုတ်ပြည်ကြီးက အရင်ထက်ပိုပြီး အာဏာရှင်ဆန်လာတော့မှာကို စိုးရိမ်လာခဲ့ပြီး ဒက်စ်မွန်က ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလန်သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့ပါတယ်။ (သူတို့ရဲ့တစ်ဦးထဲသော သားငယ်လေးကလည်း အင်္ဂလန်မှာ ကျောင်းဝင်ခွင့်ရခဲ့တာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်)။ မတိုင်ခင် ၂ နှစ်တုန်းက ဝစ်ဒ်နီနဲ့ အိမ်ထောင်ပြိုကွဲခဲ့ပြီး၊ ဇနီးဟောင်း ပျောက်ဆုံးသွားချိန်ကတည်းက တရုတ်ပြည်သို့ ပြန်သွားခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။
ဒက်စ်မွန်က ရှန်ဟဲမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး ကလေးအရွယ်မှာပဲ ဟောင်ကောင်သို့ ပြောင်းရွေ့ကာ အမေရိကန်မှာ ကောလိပ်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းမှ အင်တာဗျူးခဲ့တာကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုထားပါတယ်။
ဝစ်ဒ်နီနဲ့ ဖုန်းပြောခဲ့တုန်းက သူအခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ?
သူ့ပြောသံအရတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်အတွင်းမှာ အပြင်လောကနဲ့ သတင်းအဆက်အသွယ် လုံးဝအဆက်ပြတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောတယ်။ သူ့အပေါ်မှာ သက်ညာစွာနဲ့ ဆက်ဆံတယ်လို့ ပြောတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့်စာအုပ်ဖြန့်ချီဖို့ကို ရပ်လိုက်ဖို့ တောင်းဆိုတယ်။ "အကယ်၍ ငါတို့ရဲ့သားလေးနဲ့ ငါ တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် နင်ဘယ်လို ခံစားရမလဲ?" လို့မေးတယ်၊ သူခြိမ်းခြောက်တာလို့ပဲ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန်လတုန်းက သူ့မိခင်ဆုံးသွားတယ်၊ သူ့မိခင်က နေ့တိုင်းပဲ သူ့ဆီဖုန်းဆက်ခဲ့ပြီး တစ်နေ့ကျရင် အဆက်အသွယ်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်ကသူ့ကိုမေးခဲ့တယ် "၄ နှစ်လုံးလုံး နင်ရဲ့ဖုန်းက သေနေတယ်၊ ဒီနေ့မှ ငါ့စာအုပ်သတင်းလည်း ထွက်လာရော၊ နင့်ဖုန်းက ပြန်ဆက်လို့ရတယ်၊ ဒါက တိုက်ဆိုင်မှုသက်သက်တစ်ခု မဟုတ်ဘူးထင်တယ်" လို့ပြောခဲ့တယ်။
စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်တော့ နင်တို့နှစ်ယောက် အတော်ကိုချစ်ခဲ့ကြတယ်၊ ဝစ်ဒ်နီရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုက နင့်အပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သလဲ?
အဓိကတော့ ကျနော်တို့သားလေးအတွက်ပါ။ သူကအခုမှ ၁၂ နှစ်ပဲ ရှိသေးတာ၊ ဒီကိစ္စက သူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ထိခိုက်မှုရှိတယ်။ တခါတလေ သူပေါက်ကွဲပြီးငိုတယ်၊ သူ့အမေကို အိပ်မက်မက်တယ်၊ သူ့အမေ ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြောပြတယ်။ အကယ်၍ ဝစ်ဒ်နီက ဆုံးပါးခဲ့ပြီဆိုရင် ဇာတ်လမ်းကိုအဆုံးသတ်ပြီး၊ အမှတ်တရကောင်းတွေကို တွေးတောရင် ဘဝကိုခရီးဆက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူပျောက်ဆုံးနေတာက ရင်ဆိုင်ဖို့ အတော်ခက်ခဲပါတယ်။ ကျနော်စာအုပ်ကိုရေးတာက နဂိုတုန်းကတော့ ကျနော်သားအတွက် လက်ဆောင်ပေးဖို့ပါ၊ နောက်ပိုင်းကျမှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။
နင် နဲ့ နင့်သား ဝစ်ဒ်နီကို ပြန်တွေ့ရမယ်လို့ ယုံကြည်ထားသလား?
ဒီအချိန်မှာတော့ ဖြစ်လာမယ်လို့ မမြင်ပါဘူး။ သူ့ကို တရုတ်ပြည်ထဲက ထွက်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာတယ်။ အခု ကျနော် ဟောင်ကောင်ကိုတောင် သွားလို့မရဘူး၊ တရုတ်ပြည်ကြီးတော့ ပိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျနော့်သားကိုလည်း တရုတ်ပြည်ကို သွားခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော့်သားကိုလည်း တရုတ်ပြည်ကနေ ထွက်ခွာခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်။ ဒါကြောင့် ဝစ်ဒ်နီနဲ့ လူချင်းတွေ့နိုင်ဖို့ မမျှော်မှန်းနိုင်ပါဘူး။
အင်္ဂလန်မှာနေတော့ စိတ်ချရတယ်လို့ ထင်သလား? အရင်က ထိုင်းမှာရှောင်နေတဲ့ အတိုက်အခံတွေကို တရုတ်အစိုးရက ပြန်ခေါ်နိုင်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့တယ်လေ။
ကျနော့်မိတ်ဆွေတွေ အမြဲမေးတယ် "မင်းမှာ ကိုယ်ရံတော်တွေ ထားထားသလား? မင်းရဲ့လုံခြုံရေးကို ဘယ်လိုစီစဥ်ထားသလဲ?" ဒါပေမဲ့ တကယ်လက်တွေ့မှာ ကျနော်ကတစ်ယောက်ထဲပဲ တရုတ်ပြည်ကို ဆန့်ကျင်နေတာပါ။ အကယ်၍ သူတို့က တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် ကျနော်ဘာတစ်ခုမှ ခုခံကာကွယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်က ကျနော့်ဘဝနဲ့ရင်းပြီး လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာခင်က တရုတ်လုပ်ငန်းရှင် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ ဥပမာ ဂျက်မား တို့ကို တရုတ်အစိုးရ နှိပ်ကွပ်မှုတွေလုပ်တော့ မအံ့ဩမိဘူးလား? ဂျက်မားလိုလူတွေကို အရင်က 'ထိလို့မရတဲ့ ဆရာကြီးတွေ' လို့ ထင်ခဲ့ကြတယ်လေ။
သူတို့တွေက 'ထိလို့မရဘူး' ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်ထဲမှာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံးစာရင်းကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ထောင်ထဲမှာ အဆုံးသတ်သွားတယ်။ အကြောင်းအမျိုးအမျိုးကြောင့် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အချမ်းသာဆုံးစာရင်းမှာ မပါတော့ဘူး။ ဘယ်သူမဆိုငွေကြေးအလွန်ချမ်းသာလို့ ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုထဲနဲ့ "ထိလို့မရဘူး" ဆိုတာ ရယ်စရာတစ်ခုပါပဲ။
ရှီးကျင့်ဖင်က “tigers and flies” စီမံကိန်းနဲ့ လာဘ်စားမှုတွေကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒါက စာအုပ်မှာဖော်ပြထားသလို ခရိုနီအသိုင်းအဝိုင်း ကွန်ယက်တည်ဆောက်မှုအပေါ် ထိရောက်ခဲ့သလား ဒါမှမဟုတ် ပိုပြီးတော့လျှို့ဝှက်တဲ့ အုပ်စု ဖြစ်သွားသလား?
ကျနော်ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာ အတော်များများက ကွန်မြူနစ်စနစ်ထဲမှာ ရိုက်သွင်းထားပြီးသား၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ဒီအန်အေမှာ ရှိပြီးသား၊ ပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ နှစ် ၁၀၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ် (ဇူလိုင် ၁ ရက်) အခမ်းအနားကိုပဲ ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘတ်စ်ကား ၇ စင်းအပြည့်ပါလာတဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီအမာခံတွေက ရှီးကျင့်ဖင်ဘေးမှာ ထိုင်နေပြီး အခမ်းအနားကို ကြည့်နေခဲ့တယ်။ သူတို့တွေက သာမာန်ပြည်သူတွေ၊ ဘာရာထူးမှမရှိဘူး၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဘာအကျိုးပြုမှုမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး။ သမ္မတရှီးဘေးမှာ ထိုင်ခွင့်ရဖို့ ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ တစ်ခုထဲသော အကြောင်းရင်းက အတွေးအခေါ်တူသွေးနီးမှုကြောင့်ပဲ။ ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ တော်လှန်ရေးကာလ မတိုင်မီအချိန် ၁၉၃၀ နှစ်များကတည်းက လူမျိုးစွဲဘက်လိုက်မှုတွေက စနစ်ထဲကိုသွပ်သွင်းခဲ့တယ်။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးစတက်ခါစ ၁၉၉၀-၂၀၀၀ နှစ်များက အမေရိကန်ဘဏ်ကြီးတွေနဲ့ အစိုးရချိတ်ဆက်မှုရှိတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေက ငွေကြေးအမြောက်အများ စီးဆင်းမှုရှိခဲ့တယ်လို့ ရေးထားတာ တွေ့ရတယ်။ တရုတ်အစိုးရထဲမှာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ရှိခဲ့တာတွေအပေါ် အနောက်တိုင်းပြည်တွေကို ဘယ်လောက်အထိ အပြစ်ဖို့လို့ရသလဲ?
ဒီနေရာမှာ ၂ ပိုင်းရှိပါတယ်။ တစ်ပိုင်းကတော့ အရှေ့ဥရောပတို့ အာရှ အပါအဝင် ကိုးရီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်ဝမ် တို့က တိုင်းပြည် ကြွယ်ဝလာတာနဲ့အမျှ သူတို့တွေက ပိုပြီး ဒီမိုကရေစီဆန်တဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲကုန်ကြတယ်။ အဲဒါကိုကြည့်ပြီး ကျနော်တို့က အတွေ့အကြုံမရှိဘဲ၊ မျှော်လင့်ချက်သက်သက်နဲ့ ရှိခဲ့တာကြောင့် ကျနော်တို့အားလုံးမှာ အပြစ်ရှိသလို ခံစားရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်တွေ အများကြီး ဖော်ပြလို့ရပါတယ်။
နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ ကျနော်တို့က ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ကိုပဲ ဦးစားပေးခဲ့တာ ထင်ရှားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက လက်မခံနိုင်တဲ့ အရာတွေအပေါ် မျက်ကွယ်ပြုခဲ့ပြီး ခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။ ကျနော်တို့ အကျိုးအမြတ်တွေ ရခဲ့ကြတာတော့ သေချာပါတယ်၊ ကျနော် အပါအဝင်ပေါ့။ တချိန်ထဲမှာပဲ တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းတဲ့ဦးတည်ဖက်ဆီကို ကျနော်တို့ကပါဝင်ကူညီ ပြောင်းလဲပေးနေပြီလို့ ထင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် အခုချိန်မှာတော့ "အားနည်းချက် မပြည့်စုံမှုတွေ" ကို ခဏဘေးဖယ်ထားပြီး ဒီအတိုင်းသွားနေပါမယ်။
အရင် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဝမ်ကျားပေါင်က ပိုပြီးလွတ်လပ်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်လို့ ရေးထားတယ်။ ယနေ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီထဲမှာ ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိသေးတယ်လို့ ယုံကြည်ထားသလား?
ရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မေးခွန်းတစ်ခုက "သူတို့ဘက်မှာ နိုင်ငံရေးအင်အားစု ရှိသလား?" ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ အနောက်တိုင်း မီဒီယာတွေက ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုတဲ့ အင်အားစုရှိတယ်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသူတွေကို ထောက်ခံကူညီပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာ အမြဲပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုနိုင်ငံရေးအင်အားစု လုံးဝမရှိဘူး။ ဝမ်ကျားပေါင်က ဒီမိုကရေစီကျတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုတဲ့ဆန္ဒ ရှိခဲ့တာသေချာတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့မှာ နိုင်ငံရေးအင်အားစု မရှိဘူး၊ သူက အတော်ရာထူးကြီး ရထားပေမဲ့လည်း သူကတစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြစ်နေတယ်။
အခုချိန်မှာ တရုတ်ကွန်မြူနီပါတီရဲ့ အကြီးဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုက ဘာလဲ?
တရုတ်ပြည်က အာဏာရှင်အစိုးရပဲ ဖြစ်နေခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်မှာ တစ်ဦးတည်း အာဏာရှင်ပုံစံကို ပြောင်းလဲလာတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် အခြေခံအားဖြင့် အန္တရာယ်ရှိတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်းက ရှီးကျင့်ဖင်ရဲ့ အကြိုက်ကိုလိုက်ဖို့၊ သူသဘောကျအောင် ကြိုးစားနေကြတယ်။ ရှီးက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ သူ့နောက် ရာထူးဆက်ခံနိုင်မဲ့ အလားအလာရှိသူတွေ အားလုံးကို ရှင်းပစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် အန္တရာယ်ရှိတယ်။
သူအာဏာရလာပြီး ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ အကြမ်းအတမ်း ကိုင်တွယ်ခဲ့တယ်။ နိုင်ငံရေးစနစ်က ဒီအတွက် ပြင်ဆင်မှုမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်လည်း ရှီးက အာဏာရှင်ပုံစံဖြစ်အောင် တည်ဆောက်လာခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်မှာ စနစ်က အတွေ့အကြုံရခဲ့ပြီ။ ဒါကြောင့် သူသာ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် သို့မဟုတ် သေဆုံးခဲ့ရင် တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတွက် အန္တရာယ် အတော်ကြီးမားပါတယ်။ အဲဒီအခါ လူအတော်များများက "ကဲ ငါကတော့ ဘုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်မှ ဖြစ်မယ်၊ မရခဲ့ဘူးဆိုရင် ငါခံရလိမ့်မယ်" လို့ တွေးကြလိမ့်မှာ ဖြစ်တယ်။
ခင်ဗျားက ရှီးကျင့်ဖင်ရဲ့ အတွင်းစည်းလူတွေ အတော်များများနဲ့ သိကျွမ်းခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကို ဘယ်လိုမြင်သလဲ? လူအတော်များများက သူ့ကို အစွန်းရောက်ဆိုရှယ်လစ်လို့ ထင်ကြတာ ယုံကြည်သလား?
သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ အာဏာထိန်းထားလိုတဲ့ တွန်းအားတစ်ခုက ထိပ်တန်းပါတီဝင်ဦးဆောင်တဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီ သက်တမ်းကြာစွာ ရှင်သန်နေဖို့ စိတ်ချရအောင်လုပ်တာ ဖြစ်တယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် တဲန်းအမ်မင်အရေးအခင်း သတ်ဖြတ်မှုမှာ ရှီး က ထိပ်တန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ယခင်တရုတ်ခေါင်းဆောင် တိန့်ရှောင်ဖင် က "ငါတို့ရဲ့သားသမီးတွေက ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတယ်" လို့ တကယ်ပဲ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပါတီထိပ်တန်းအရာရှိ မိသားစုတွေထဲမှာ သေချာပြုစုပျိုးထောင်ထားတဲ့ သားတစ်ယောက်စီ ရှိကြတယ်။ ဥပမာ - ချုံကင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ပေါင်ရှီးလိုင်၊ ရှီးကျင့်ဖင် (ရှီးရဲ့ဖခင်က ယခင် ဥက္ကဌမော်စီတုံးလက်ထက်မှာ အထက်တန်းအရာရှိ Xi Zhongxun) တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေက ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ မြန်ပါတယ်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အာဏာတည်မြဲဖို့ လိုအပ်ချက်နဲ့ သူဟာ တစ်ဦးထဲသော အသင့်လျော်ဆုံးသူဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားတာကြောင့် ရှီးကျင့်ဖင်က အာဏာတည်မြဲအောင် ကြိုးစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တခြားသောကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ နည်းပညာ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေကို ဖြုတ်ချခဲ့တယ်၊ ပါတီအတွင်းဖွဲ့စည်းမှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်၊ ဒီလိုလုပ်မှပဲ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက သက်တမ်းကြာရှည်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့က အကြောက်လွန်ပြီးတော့ တရုတ်ပြည်သမိုင်းကို ပြန်ပြီးရေးဖို့ ကြိုးစားကြပြီး Great Firewall တံတိုင်းနဲ့ တရုတ်ပြည်ကို ပိတ်ထားခဲ့တယ်၊ ပြည်သူတွေကို ဦးနှောက်ဆေးခဲ့တယ်၊ ရှင်းကျန်းပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ အပါအဝင်ပေါ့။ ဒါတွေအားလုံးက သူတို့ရဲ့အာဏာပါဝါကို သဘောထားကွဲလွဲပြီး စိန်ခေါ်လို့မရအောင် လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ နဲ့ တခြားသောကိစ္စတွေမှာ ကမ္ဘာတဝှမ်းက ဝေဖန်ရှုံ့ချနေကြတယ်။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ဒါတွေကို ဂရုစိုက်တယ်လို့ ထင်သလား?
သူတို့သေချာပေါက် ဂရုစိုက်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့အတွက် ပထမဆုံးက အာဏာတည်မြဲဖို့ပါပဲ၊ နိုင်ငံတကာပုံရိပ် နဲ့ တခြားကိစ္စတွေကတော့ ဒုတိယပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အမေရိကန် နဲ့ အနောက်တိုင်း အင်အားကြီးအုပ်စုတွေက တရုတ်ပြည်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သင့်တယ်လို့ ထင်သလဲ?
ကျနော်တို့ တရုတ်ပြည်နဲ့ ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာကို နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ရေရှည်အကျိုးရလာဒ်က ဘာကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ? သိဖို့လိုပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အခုချိန်မှာ လူတိုင်းက မျှော်လင့်နေတာပဲ ရှိကြတယ်။ လက်တွေ့ကျတော့ ရေရှည်မှာ မတူညီနဲ့စနစ်နှစ်ခုက အတူပူးတွဲပြီး နေလို့မရပါဘူး။ တကယ်လိုအပ်နေတာက နယ်မြေချဲ့ထွင်မှု ကိုသာမက စီးပွားရေးကိုလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာတိုက်ခိုက်နေတာက စီးပွားရေးအရ ဖြစ်ပါတယ်။
ထရမ့်ကို ကြိုက်သည် မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ သူက တရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်ကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးက ခေါင်းရှောင်ဖို့ လုပ်နေကြပေမဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ထွက်လာပြီး "ငါကတော့ ဒီလိုမြင်တယ်၊ ငါတို့ကတော့ ဒီလိုလုပ်မယ်ကွ" ဆိုခဲ့တယ်၊ အဲဒါက လူတွေရဲ့အမြင်ကို ပြောင်းသွားစေခဲ့တယ်။ ထရမ့်မပါဘဲနဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂက တရုတ်ပြည်ကို 'ပြိုင်ဖက်' ဖြစ်တယ်လို့ (၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ မှာ အီးယူပါလီမန် think tanks မှ တရုတ်က စီးပွားမိတ်ဖက် မှ ပြိုင်ဖက် ဖြစ်လာပြီဟု ထုတ်ပြန်ချက်) ပြောခဲ့မလားဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ ဒါကြောင့် ထရမ့်က သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း တကယ်လုပ်ခဲ့တာတော့ သေချာတယ်။ ။
(TIME - Oct 13, 2021 - Why the Ex-Husband ofaMissing Chinese Billionaire Is Risking All to Tell Their Story)
ကိုကျော် (မြစ်ကြီးနား) - Red Roulette - တရုတ်အစိုးရ မဖတ်လိုတဲ့စာအုပ် Reviewed by Aung Htet on 5:28 PM Rating: 5